အတွေးအမြင် | Page2| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By kyawswaraung 3061 days ago on အတွေးအမြင် from www.myawady.com.mm
By suwatisoe 3064 days ago on အတွေးအမြင် from burma.irrawaddy.org
“အဟောင်းကြီး ဆိုရင်တော့ သေပြီ”။ သတင်းစာဆရာလည်း ဖြစ်၊ စာပေဝေဖန်ရေး ဆရာလည်း ဖြစ်သော မိတ်ဆွေ စာရေးဆရာကြီးတဦးက ကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကွေ့လိုက်ရင်း ဆို၏။ ကျမက ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်ရင်း စိုးရိမ်တကြီး ရှေ့သို့ ကိုယ်ကို ကိုင်း၍ နားထောင်ရင်း လိုက်ပါနေ၏။ ကျမ စိုးရိမ်သည်မှာ ကားမောင်းရင်း တိုက်မိမှာကို မဟုတ်၊ သူ ပြောသော “အဟောင်းကြီး” ကို ဖြစ်၏။ကျမတို့ကား “လူကြီးတွေ” ဖြစ်နေပေပြီ။ အသက် ၆၀ ကျော်၍ ၀န်ထမ်းဘ၀က အနားပေး ခံထားကြရပြီ။ သို့သော် ကျမတို့ကား မနားသေး။ ၀န်ထမ်း မလုပ်တော့ သော်လည်း စာပေတာဝန်ကိုမူ ဆက်လက် ထမ်းရွက်နေကြဆဲ၊ သင်ကြားပေးမှုများ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ခြေ လက် ဦးနှောက်များ ကောင်းနေသေး သမျှ
By suwatisoe 3064 days ago on အတွေးအမြင် from www.7daynewsjournal.com
တည်ရှိပြီး နှစ်စဉ်နှင်းခဲတတ်သည့် တောင်တန်းရှည်ကြီးများ သေသပ်လှပစွာ ၀န်းရံထားသော မြန်မာပြည်အရှေ့မြောက်ဖျား နယ်နိမိတ်မျဉ်းပေါ်က မြို့နယ်လေးသည်မူရင်း ဒေသခံများဖြစ်သော လော်ဝေါ်၊ လချိတ်၊ လီဆူးလူမျိုးတို့၏ လိုတရ နတ်ဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြက်ပျံမကျစည်ကားခဲ့သည်ဟု ယနေ့လက်ညှိုးထိုးပြလျှင် မည်သူ မျှယုံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါပေ။လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တွေမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်လွန်းပါသည်ဟု ဒေသခံတို့ တခုတ်တရပြောပြကြသည့် မြို့လေးက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီသက်တမ်း သုံးနှစ်နီးပါးအတွင်းမှာပင် ရှေးဟောင်းမြို့ပျက်တစ်ခုအလား သမိုင်းတင်ရမလိုလို အခြေအနေသို့ ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။
By aungaung 3063 days ago on အတွေးအမြင် from news.yatanarpon.com.mm
By miemiekhine 3065 days ago on အတွေးအမြင် from popularmyanmar.com
By kokopaing 3070 days ago on အတွေးအမြင် from news.yatanarpon.com.mm
By sandarmoe 3072 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
By htainlin 3072 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
ဗမာပညာတတ်များနဲ့ စင်ဒရဲလားအတွက် ဖိနပ်တစ်ဖက်
By nyomyint 3082 days ago on အတွေးအမြင် from www.news-eleven.com
ဗမာပြည်မှာ ကိုလိုနီလက်အောက် အရင်ဆုံး ကျရောက်ခဲ့တဲ့ အောက်ပြည်သား မွန်၊ ကရင်နဲ့ ကမ်းရိုးတန်းသား ရခိုင်လူမျိုးစုတွေကနေ စပြီးမှ ပညာတတ် လူတန်းစားတွေ ထွန်းကားလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ဘင်္ဂလားနယ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက အများဆုံးနဲ့ အရင်ဆုံး ပညာတတ်ကြပြီး ယဉ်ကျေးမှု အစောဆုံး ထွန်းကားခဲ့တဲ့ မွန်လူမျိုးတွေတောင် ဒီလောက်မများခဲ့ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ကရင်အုပ်စုကတော့ အနောက်နိုင်ငံ သာသနာပြုတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်ပြီး မစ်ရှင်ကျောင်းတွေက အစပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
By eieilwin98 3079 days ago on အတွေးအမြင် from burma.irrawaddy.org
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြား အမျိုးသားတဦးနှင့် လက်ထပ်မည်ဆိုပါက ထိုဘာသာခြား အမျိုးသားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရမည် ဆိုတာကို ဥပဒေအဖြစ် ပြဌာန်းဖို့ ဘုန်းတော်ကြီးတချို့စသည့်အမှု ယခု ရွာပတ်ပြီး အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ကြုံပြီဖြစ်သည်။ဒီအဆိုကိုပြန်ကြည့်ပြီး သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဟု ရည်စူးထားဟန် တူသော်လည်း လက်တွေ့တွင် အမျိုးသမီးများအား ချုပ်ချယ်ကန့် သတ်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးကို သွယ်ဝိုက်၍ ချိုးဖောက်ထားသော အဆိုဖြစ်နေသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ သူတို့နှစ်သက် သဘောကျသည့် အိ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ပညာစုံလို့ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်ကြပြီ ဆိုတာနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြပြီး မိသားစုဘ၀ကို တည်ဆောက်ကြရတာ လောကရဲ့ ဓမ္မတာပါ။ အဲဒီလို မိသားစု ဘ၀တစ်ခုကို ထူထောင်တဲ့ နေရာမှာ ဘ၀ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ချမှတ်ကာ အိမ်ထောင်ပြုကြသူများ ရှိသလို မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရသူများ၊ မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ ပေါင်းသင်းရမှာစိုးလို့ ဘ၀အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘဲ ချစ်သူနောက်လိုက်ပါ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ ရသူတွေ၊ မနူးမနပ်အရွယ် အတောင်မစုံ၊ ပညာမစုံခင် အောင်သွယ်ကောင်းပြီး အိမ်ထောင်ကျခဲ့ ရသူတွေနဲ့ အခြားအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မပြည့်မစုံ၊ မစုံမလင် ဘ၀များနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ ရသူတွေလည်း အသီးသီး ရှိေ
အလုပ်တစ်ခုကို စွမ်းသလောက် လုပ်ခြင်းသည် အလုပ်တွင်လည်း ဂုဏ်ရှိ၏။ လုပ်သူတွင်လည်း ဂုဏ်ရှိ၏။ အလုပ်ကို သေသေချာချာလုပ်လေ တစ်စတစ်စ တိုးတက်လေပင်။ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်သည့်အတွက် အလုပ်တန်ဖိုးလည်း တက်လာသည်။ ဘယ်သူ့လက်ရာ ဘယ်လိုစသဖြင့် ချီးကျူးခံရ၏။ ဒါဘယ်သူ လုပ်တာပဲဟူ၍ မြှောက်စားခံရ၏။
အလုပ်ကို ပြီးပြတ်အောင် လုပ်ခြင်း၊ သေသေချာချာ လုပ်ခြင်းသည် လုပ်သူ၏ စိတ်နေသဘောထား တိုးတက်ကောင်းမြတ်အောင် ပြုပြင်နိုင်စွမ်း ရှိ၏။ အလားတူပင် အလုပ်ကို ပေါ့တိပေါ့ဆ လုပ်ခြင်းသည် လုပ်သူ၏ စိတ်ဓာတ်ကို ယုတ်နိမ့်ကျဆင်း စေလေသည် . . . . .
ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာကို မယုံတာ ဒီမိုကရေစီကို မယုံတာပဲ
အကြောင်းကောင်းပြ၊ ခြွင်းချက်တွေထား၊ လှည့်ပတ်ကွေ့ဝိုက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲ၊ နောက်ကြောင်း မပြန်တောင် ရှေ့ဆက် မသွားနိုင်အောင် စီမံချက်တွေချ၊ ပြည်သူတွေ မျက်စေ့လည်အောင်၊ နားမလည်အောင် နည်းအဖုံဖုံတွေ သုံးနေတာဟာ ရိုးသားမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပုံရိပ်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ by the people, for the people လို့ သိနားလည်ထားပါတယ်။ ပြည်သူက ပြည်သူ့အတွက် စီမံခန့်ခွဲတဲ့ စနစ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။ ပြည်သူဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ particle မှ solid ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ ခိုင်မာတဲ့ ထုထည်ရဖို့ မှုန်မွှားတဲ့ အမှုန်လေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အမှုန်စစ်စစ်တွေရဖို့ ဆန်ခါ (ဇကာ) နဲ့ စစ်တု
By mohmohkhin 3083 days ago on အတွေးအမြင် from www.thevoicemyanmar.com
By sandarmoe 3085 days ago on အတွေးအမြင် from www.news-eleven.com
မျှတမှု မရှိတဲ့ လူဦးရေ တိုးပွားမှုဟာ မိသားစုကိုလဲ ဆင်းရဲတွင်းထဲကို တွန်းပို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ မွေးဖွားပြီးရုံနဲ့ ပြီးဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးပြင်းလာအောင် ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးရမှုတွေ၊ ပညာသင်ကြား ပေးရမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး မိသားစုက တာဝန်ယူ ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ ကလေးအရေအတွက်ကိုသာ ယူဆောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံအများစုမှာ (အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများမှာ) အသိပညာပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သော လူဦးရေဆိုင်ရာ မူဝါဒများ (population policies) များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လာကြ ရပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ အစိုးရ၊ ပြည်သူရွေးချယ် တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရ၊ ပြည်သူတွေအတွက် အစိုးရဆိုရင် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်နေမယ်။ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်ဘူးတဲ့။
အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေအတွက် ဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေ ကောင်းစားဖို့ပဲ မဟုတ်လား။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြင့်ဆုံး အုပ်ချုပ်မှု အာဏာရှိသော အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်သည် သမ္မတပင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့က by the people ဆိုတဲ့အတိုင်း ရွေးပေးရမည်။ သမ္မတက for the people ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြည်သူတွေအတွက် အုပ်ချုပ်ရမည်။ ထိုသမ္မတ မျိုးသည်သာ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်ဘဲ တည်တံ့နေမည် ဖြစ်သည်။ ဒါကိုလင်ကွန်းက shall not perish from the earth ဟု ပြောခဲ့ပါသည် . . .
သယံဇာတ ကျိန်စာသင့်နေသော မိုးကုတ်
နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ တူးဖော်ခဲ့ကြသော်လည်း တောင်ကြီးဟာလည်း လှမြဲလှလျက် ရှိပါသည်။ ယခုမူ ထိုအလှတရားများ ပျောက်ကွယ်သွားမည်လား၊ ဓာတ်တော်တောင်ကြီး မြေကြီးမြေပုံပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားမည်လား၊ ဒီတောင်ကြီး မရှိတော့ရင် ငါတို့သောက်သုံးနေတဲ့ ရေချို၊ ရေသန့်၊ ရေကောင်း၊ ရေထွက်တွေ ခန်းခြောက်သွားမလား၊ လေမိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ပိုခံရမလား၊ ပိုပြီး အေးလာမလား၊ ပူပြင်းလာမလား၊ ...... လား၊ လား.....လားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်သောက ဗျာပါဒတွေကို ယနေ့ မိုးကုတ်သူ၊ မိုးကုတ်သားတွေ စိုးရိမ်သောက ဖြစ်နေကြရပါသည်။